IOS का लागि तीन उत्तम ईमेल प्रबन्धकहरू आईफोन समाचार
इ-मेल प्रबन्धक आज धेरै व्यक्तिहरूका लागि लगभग अपरिहार्य उपकरण हो, विशेष गरी ती व्यक्ति जसले प्रति दिन संचारको एक महत्वपूर्ण रकम प्राप्त गर्छन्। जहाँसम्म, आईओएस कारखानाबाट स्थापना भएको मेल अनुप्रयोग स्पष्ट रूपमा अपर्याप्त छ जोसँग ई-मेलमा उनीहरूको व्यावसायिक गतिविधिको लागि अपरिहार्य उपकरण छ। जहाँसम्म, आईओएस अनुप्रयोग स्टोरमा विकल्पहरूको एक श्रृंखला छ जुन हामी मिस गर्न सक्दैनौं यदि तपाईं आफ्नो ईमेल अरू कसैको जस्तै व्यवस्थापन गर्न चाहानुहुन्छ भने, आईफोन समाचारका लागि आइओएसका लागि तीन उत्तम ईमेल प्रबन्धकहरू कुन हुन् भनेर हेर्नुहोस्।
हामी एक सुरू गर्छौं जुन मेरो लागि सब भन्दा राम्रो हो, र जुन मैले हाल प्रयोग गरिरहेको छु। न्यूटनको कुञ्जी भनेको यो क्लाउडमा छ, यस तरिकाले यसले ग्यारेन्टी गर्दछ कि तपाईं तपाईंको सबै सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईंको लागि कामको केही अंश गर्नुहुनेछ। यो आईओएस संग एक शानदार एकीकरण छ र अन्य चीजहरूको बीचमा HTML हस्ताक्षर अनुमति दिन्छ। यद्यपि न्युटनको नकारात्मक बिन्दु, सबै भन्दा बढि अनुप्रयोगको बाबजुद पनि यो हो कि यसलाई सशुल्क सदस्यता आवश्यक पर्दछ €।। .49,99 to सम्म खर्च हुन सक्दछ बर्ष यसैले न्युटनले सिफारिश गर्दछ उनीहरूको लागि जोसँग पेशेवर ईमेल उपकरण छ।
न्यूटनको साथ हामी ईमेल पठाउनको लागि अनुसूची गर्न सक्छौं, र पढ्ने सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछौं। एक पेशेवर अनुप्रयोग जुन कार्यमा भर पर्छ। यो म्याकोस र पीसी को लागी एक संस्करण छ।
को अनुप्रयोग माइक्रोसफ्ट। यसको प्रयोगको खुशी, यसको हल्काता र छिटो पछिल्लो आईओएस समाचारहरू समावेश गर्न यसलाई कसरी छिटो अपडेट गरेर सबैलाई चकित पार्यो। कुनै श doubt्का बिना, नि: शुल्क मेल प्रबन्धन अनुप्रयोगहरूको यो मलाई सबैभन्दा मनपर्‍यो। यसले HTML मेल हस्ताक्षरलाई पनि अनुमति दिन्छ र धेरै विकल्पहरू समावेश गर्दछ जुन हामीले आउटलुकको वेब संस्करणमा फेला पार्दछौं। सब भन्दा राम्रो अंश यो नि: शुल्क हो।
यो अनुप्रयोग क्रस-प्लेटफर्म पनि हो, जुन वास्तवमै चाखलाग्दो हुन सक्छ। एक धेरै सहज डिजाइन र प्रयोगकर्ता इन्टरफेस, त्यसैले यो अत्यधिक सिफारिश गरीन्छ। यो आईओएसको लागि पनि नि: शुल्क हो र हामी सिफारिस गर्दछौं कि यदि तपाईं पहिलेका दुईले विश्वास गर्दैनन् भने यो प्रयास गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » IOS का लागि तीन उत्तम ईमेल प्रबन्धकहरू
म धेरै दु: खी छु तर म यो लेखमा फरक छुने छैन ... किनकि ती व्यवस्थापकहरू राम्रो छैनन्, तर किनभने एयरमेल त्यस सूचीमा हो वा हो हुन पर्छ ... मैले सबै प्रयास गरेको छु र एयरमेलले उनीहरू बराबर भयो भने यो बढि छैन, र विशेष गरी आउटलुकमा।
कसैलाई मेरो मेल याद छैन (तपाई ब्यानर हेरेर विज्ञापन वा समर्थन निष्क्रिय गर्न सक्नुहुनेछ)। म चाहान्छु कि सबै पोष्ट प्रबन्धकहरूले यसको प्रतिलिपि बनाउँदछन्। शुभकामना
फ्रान्जुएलोलाई जवाफ दिनुहोस्
एलोन्सो डे एन्टेररियोस भन्यो
तपाइँ कसरी एयरमेल राख्नुहुन्न? यो टाढा ती सबै लाई पार गर्दछ। आउनुहोस् ...
Alonso de Entrerríos लाई जवाफ दिनुहोस्
तिनीहरू राम्रा ईमेल ग्राहकहरू हुन् (मैले ती सबैलाई प्रयोग गरेको छु) तर त्यहाँ एक सबैभन्दा उत्पादनशील छ र यसको उपयोगिता, व्यावहारिकता र सौन्दर्यको कारणले फरक पार्दछ; यो Unibox हो। यसले प्राप्तकर्ताहरूलाई ईमेल एकीकृत गर्दछ र थ्रेडहरूलाई उत्तम बनाउँदछ।
मैले धेरै मेल क्लाइन्टहरूको प्रयास गरेको छु र कुनै श doubt्का बिना, म UNIBOX लाई प्राथमिकता दिन्छु, दुबै म्याकोस र आईओएसको लागि।
फ्र्यान्टेस्टिकलाई जवाफ दिनुहोस्
वास्तवमै निराश लेख ... मलाई व्याख्या गर्न दिनुहोस् ...
सुरु गर्न, अति सतही, कुनै पनि समयमा लेखकले पत्ता लगाउँदैन - निश्चय नै - आईओएसका लागि ईमेल प्रबन्धकहरूको महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू र जसले उनीहरूलाई प्लेटफर्मको पूर्वनिर्धारित ग्राहकबाट बाहिर खडा गराउँदछ।
यो जस्तो साहसी: "आईओएसका लागि तीन उत्तम ईमेल प्रबन्धकहरू", मेरो स्वादको लागि, लेखकलाई आफ्नो दाबीहरूको पाठकहरूलाई विश्वस्त पार्न, र पूर्णतया नबढ्न, सुझावको प्लेटफार्महरूको बीचमा डीईईपी अनुसन्धान र तुलना आवश्यक पर्दछ। कम से कम भन्नको लागि "decaf" आईटम।
म मेरो टिप्पणीहरूमा के आधार बनाउँछु? निम्नमा:
- तथ्य यो कुराको लागि कि ईमेल क्लाउडमा रहेको छ र ग्यारेन्टी गर्दैन कि सबै सूचनाहरू केवल त्यस तथ्यको लागि प्राप्त हुनेछन्। मेल क्लाइन्ट मेल यो गर्दछ।
- एक iOS संग एक शानदार एकीकरण संग? पाठ्यक्रम को मेल पनि ग्राहक।
- HTML मा हस्ताक्षर, ईमेल पठाउनको तालिका बनाउँनुहोस् र सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहोस्? NEWTON को पक्षमा पोइन्टहरू, तर यसको लागि year 49.99 एक वर्ष तिर्नुहोस्?
- उपयोग गर्न सजिलो, हल्कापन? मेल यो छ।
- HTML मेल हस्ताक्षरहरू? OUTLOOK को पक्षमा पोइन्ट गर्नुहोस्
- नि: शुल्क? मेल नि: शुल्क छ
- बहु प्लेटफर्म? स्पार्कको पक्षमा पोइन्ट गर्नुहोस्।
- डिजाइन र प्रयोगकर्ता इन्टरफेस? मेल खराब छैन र यो पनि धेरै सहज छ। प्रोफेसनल प्रयोगको लागि अनुप्रयोग सिफारिश गर्दा मात्र यसको डिजाइन र इन्टरफेस मलाई धेरै जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
धेरै महत्वपूर्ण! कुनै पनि हालतमा म मेल प्रबन्धकहरूको यी उत्कृष्ट विकल्पहरू (आँखा: विकल्पहरू) लाई अयोग्य ठान्छु! पक्कै पनि उनीहरूसँग धेरै सुविधाहरू र कार्यहरू छन् जुन उनीहरूलाई प्रयोगकर्ताका लागि अत्यधिक सिफारिश गरिएको बनाउँदछ र लेखकलाई समय वा इच्छाको कमीले गर्दा उनीहरूले यस लेखलाई मूल्यवान बनाउँदैनन्!
बधाई छ र मलाई आशा छ कि त्यसपछिको लेखहरूमा चीजहरू राम्रो तरीकाले र राम्रो तर्कका साथ व्यवहार गरिनेछ!
लेखहरू किन राख्नु? तिनीहरूले ज्यादै बेवकूफ लेखहरू लेखे जुन उनीहरूले के कुरा गरिरहेछन् भन्ने बारे। आजको सब भन्दा राम्रो ईमेल टाढा AIRMAIL बाट हो !!!!!!!!! लेख प्रतिलिपि गर्न वा टाँस्नु अघि, अनुसन्धान गर्नुहोस् !!!!!!! यसैले यस पृष्ठमा कम र कम पाठकहरू छन्! लेखहरूको घृणा, जहाँ तिनीहरू यस्तो जानकारी प्रमाणीकरण गर्न समय लिदैनन्! न्यूटन, oitlook.spark सबै भन्दा राम्रो प्रबन्धक ???? हा हा हा हा हा हा हा
Tio लाई जवाफ दिनुहोस्
सहूलियत क्यालेन्डर, सीमित समयको लागि बिभिन्न पात्रो